Banyere Anyị - Wanhe Industry na Trade Co., Ltd.
Wanhe Grass bu uzo di elu nke ntaneti na-ejikọ R&D, mmeputa na ire ahia ma nye aka ka ha buru ezigbo ndi na-eweta oru ahia na imeputa ubi nke ahihia aka.
Huai'an Wanhe Industry na Trade Co., Ltd. emi odude ke Bank nke Beijing-Hangzhou Grand Canal na mara mma. Ọ bụ obodo nke Zhou Enlai, nwoke ukwu nke ọgbọ, Huai'an City, Jiangsu Province. Xinchang Railway na Beijing-Shanghai Expressway gafere obodo ahụ na njem dị mfe. Ngwa ndị bụ isi bụ ahịhịa egwuregwu na ahịhịa na ngwaahịa ndị ọzọ site na ụlọ ọrụ anyị. Anyị emeela mmekọrịta dị ogologo ma kwụsie ike na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ndị ọrụ n'ime afọ 20 gara aga.Eksports na-enweta ihe karịrị 80% nke ahịa niile.
Wanhe nwere teknụzụ tozuru oke na akụrụngwa nrụpụta zuru oke.
A na-akwadebe ụlọ ọrụ ọ bụla na ụlọ nyocha usoro, akụrụngwa nyocha zuru ezu wdg, akụrụngwa ahụ bụ injinị anyị ma ọ bụ mbubata si mba ọzọ. Ọ bụla mmepụta akara nwere ike ime ka ihe karịrị 1500 square mita wuru ahịhịa kwa ụbọchị. Ọ nwere ike ịkwado ogo ndị ahịa niile na oke chọrọ.
Wanhe Grass na-agbaso echiche nkwalite sayensị
Teknụzụ na Nzụlite nka dị ka Ebumnuche Mgbasa Ozi Companylọ Ọrụ
Kemgbe nguzobe ya, ika a na-agbaso echiche sayensị banyere mmepe, ma mee nyocha na teknụzụ na ndị ọrụ ịzụ ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ ọrụ ahụ. A pụrụ iche na nkà na ụzụ nnyocha na mmepe ngalaba e guzobere, na a oru R&D otu na elu agụmakwụkwọ iru eru na ike ọhụrụ ike na-eguzobe. Thedị a na-a attentiona ntị na mbanye na ịkọ talent, wee were ndị ọrụ R&D teknụzụ ogologo oge iji mee ka ndị R&D na-aga n'ihu. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ga-enye ọzụzụ ndị ọkachamara maka ndị mmadụ dị ugbu a, ma ga-ahazi ịdebe ma mụta site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ma na-emeziwanye ihe ọmụma ọkachamara na ikike ọhụụ nke ndị ọrụ R&D.
Dị ahụ jikọtara nnukwu mkpa maka nyocha na mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ. Kwa afọ, ọ na-etinye ọtụtụ ego na nyocha na mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ, ma rụpụta nnukwu nsonaazụ. N'ime ha, asambodo patent atọ ka enwetara, na ụdị ụdị dị iche iche ka emebere maka ubi dị iche iche. N'ime oru mmepe ohuru ohuru, akara a na - ewusi mgbako na mmekorita ya na ulo oru nyocha nke ulo dika mmepe nke teknụzụ na ochicho ahia, na site na iwebata sayensi na mmepe mmepe, ihe nchoputa sayensi a na - agbanwe bu ngwa ngwa o kwere mee, meputa uru maka ulo oru .
Huai'an Wanhe Industry na Trade Co., Ltd. emi odude ke Bank nke Beijing-Hangzhou Grand Canal na mara mma. Ọ bụ obodo nke Zhou Enlai, nwoke ukwu nke ọgbọ, Huai'an City, Jiangsu Province. Xinchang Railway na Beijing-Shanghai Expressway gafere obodo ahụ na njem dị mfe. Ngwa ndị bụ isi bụ ahịhịa egwuregwu na ahịhịa na ngwaahịa ndị ọzọ site na ụlọ ọrụ anyị. Anyị emeela mmekọrịta dị ogologo ma kwụsie ike na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ndị nnọchi anya afọ 20 gara aga. Ọpụpụ gụrụ karịa 80% nke ngụkọta ahịa. Iji mezuo mkpa dị iche iche nke ndị ọrụ, anyị na-enyekwa ọrụ OEM na ODM.
Anyị ụlọ ọrụ na-arụpụta na akanyam nile di iche iche nke pụrụ iche egwuregwu na odida obodo na ngwaahịa, nke merieworo otuto si ahịa niile na mba ruo ọtụtụ afọ. Mepụta uru maka ndị ahịa na anyị amamihe na ajirija. "Mmakọ bụ ihe kachasị ọnụ ahịa na okwukwe" bụ nkwenye nke puku mmadụ iri ọ bụla. Anyị kwesịrị rube isi na mmụọ ọrụ nke "ịkwụwa aka ọtọ, pragmatism, ihe ọhụrụ na mmepe" ma na-etinyekwu onyinye n'ihe kpatara agụmakwụkwọ.
Kwa afọ anyị na-ekere òkè n'ọtụtụ ụlọ ngosi ihe ngosi nke ụlọ na nke mba ọzọ, n'otu oge ahụ na-eleta ndị ahịa ma na-ekwurịta azụmahịa.
Anyị ga-anapụta ndị kasị mma logistic ọrụ dị ka choro nke ọ bụla ahịa.
Iji zute onye ọrụ dị iche iche achọrọ, Wanhe Grass na-enye ọrụ nhazi OEM / ODM dị elu maka ụlọ ọrụ ụwa, nke na-ele anya dịka otu n'ime isi ọrụ nke ụlọ ọrụ ogologo oge. Ihe niile OEM / ODM choro bu ndi otu ndi oru aka nke mmepe ahia na usoro iwu. Mee nkwa ụdị omenala, ọnụọgụ, akara, broshuọ, nkwakọ ngwaahịa, wdg, yana njikwa mma site na nyocha siri ike dịka arịrịọ gị si dị. Anyị ga-eji obi anyị niile kwekọọ na mkpa ndị ahịa iji nye ogo na ọrụ izizi, nyere gị aka ịmepụta akara gị.
Mgbe erechara ya
Nkwa siri ike: ndị injinia ọkachamara họpụtara ngwaahịa niile. Akwụkwọ ọnụahịa nkịtị na-emesi ike ịzụta ma jiri ikike.
Mmepụta na nnyefe
A na-ebubata ngwongwo zụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị na ụlọ ahịa flagship n'ụlọ nkwakọba ihe nke ụlọ ọrụ ahụ. (Ewezuga ngwaahịa pụrụ iche)
Ọkọlọtọ: Mbupu site na ala, ikuku na ụgbọ mmiri (Biko kwuo ma ọ bụrụ na ịnwere ihe dị mkpa ị chọrọ)
Mgbe emechara ahịa
Iji hụ na a ga-edozi nsuso niile nke ngwaahịa na nzaghachi n'oge, iji nweta nkwukọrịta na-arụ ọrụ nke ọma karịa gị, yabụ ọ ka mma ịnye nọmba nkwekọrịta nke enwere ike soro data niile mgbe ị na-emepụta.
Nchikota ahihia ahihia ahihia ala, Ru Egwuregwu Golf Grass, Bọọlụ Turf Grass, Ogige Astro Turf, Caromi Ahịhịa Grass, Wuru Lawn,